Tharunk | थपिए ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री, टीम ओलीमा को-को अटाए ? – Tharunk
Home / समाचार / पत्रपत्रिका / थपिए ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री, टीम ओलीमा को-को अटाए ?
थारु वेवसाइट	२० पुष २०७६, आईतवार	Hits : 1251
२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री थप्दै सरकार विस्तार गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेबाट ६ मन्त्री बनेका छन् भने माओवादीका पाँच मन्त्री बनेका छन् ।